Sawirro: Qoor-Qoor oo faah faahiyey wejiga labaad ee shirka Dhuusamareeb | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Sawirro: Qoor-Qoor oo faah faahiyey wejiga labaad ee shirka Dhuusamareeb
Madaxweynaha maamulka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) oo xalay ka hadlayey xaflad lagu soo xirayey wejiga koobaad ee shirka Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyey wejiga labaad ee shirkaasi oo lagu wado inuu maalmaha soo socdo ka bilowdo isla gudaha magaaladaasi.
Qoor-Qoor ayaa marka hore khudbaddiisa ku sheegay in shirkii madax goboleedyada uu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan, kaas oo qabsoomay 11-ka iyo 12-kii bishan July.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug ayaa tilmaamay in wejiga labaad ee shirka ay ka soo qeyb-geli doonaan madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha, iyaga oo ka wada-hadli doono xaaladda dalka iyo doorashooyinka.
Dhinaca kale Qoor-Qoor ayaa boggaadin u jeediyey shacabka Galmudug isaga oo uga mahadceliyey, sida ay uga shaqeynayeen nabadda deegaanka iyo tan guud intaba.
Munaasabadda xiritaanka shirka Dhuusamareeb waxaa goob-joog ahaa Madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Koofur Galbeed iyo Hir-Shabelle.
Previous articleXaliimo Yarey oo la kulantay qaar ka mid ah Xisbiyada Dalka
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo gaaray magaalada Garowe